ईमेल चेकलिस्ट: १ Send चरणहरू तपाई क्लिक पठाउनु भन्दा पहिले! | Martech Zone
ईमेल चेकलिस्ट: १ Send चरणहरू तपाई क्लिक पठाउनु भन्दा पहिले!
शुक्रवार, अक्टुबर 7, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
हामी प्रत्येक हप्ता एक ईमेल को हेक प्रकाशित गर्छौं र हाम्रो पाठक संख्या ,,4,700०० भन्दा बढि ग्राहकहरुमा विस्फोट भएको छ! म हाम्रा सुझावहरू र चेकलिस्ट साझेदारी गर्न चाहान्थें कि हामी प्रत्येक हप्तामा जान्छौं भनेर पठाउने बटन क्लिक गर्नु अघि।
तपाइँको सामग्री हो योग्य, प्रासंगिक, अपेक्षित, र मूल्यवान ग्राहकलाई? यदि यो होईन - त्यसो भए यसलाई नपठाउनुहोस्!
एकचोटि तपाईंले ईमेल पठाउनुभयो भने, त्यहाँ सामान्यतया दुई तत्वहरू हुन्छन् जुन यसलाई प्राप्त गरेको व्यक्तिले देख्छ ... पहिलो त्यो हो जो ईमेल बाट आएको हो। तपाईंको हो नामबाट प्रत्येक पठाउनको साथ अनुरूप? के तपाईको इ-मेल ठेगाना चिन्न योग्य छ?
दोस्रो तत्व तपाईंको हो विषय। के यो लात गधा हो? के यो एक विषय रेखा हो जसले उनीहरूको ध्यान आफूतिर खिचेको छ र तिनीहरूलाई भित्र खोल्ने सामग्री पढ्न ईमेल खोल्न चाहन्छ? यदि यो हैन भने, मान्छेहरु मात्र यो बिन्दु मा हटाउनेछ।
यदि तपाईंसँग छविहरू छन् भने, तपाईं उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ Alt ट्यागहरू वैकल्पिक पाठ लेख्न जुन पाठकलाई छविहरू डाउनलोड गर्न ड्राइभ गर्दछ वा छवि बिना कार्य गर्न सक्षम हुन्छ?
तपाइँको सजावटaमा पढ्न सजिलो छ मोबाइल उपकरण? लगभग सबै ईमेलको 40०% मोबाइल उपकरणमा पढिएको छ र संख्या प्रत्येक बर्ष बढ्दै छ। यदि तपाईंसँग लामो ट्रेलि text पाठको साथ विस्तृत ईमेल छ भने, पाठक निराश हुन गइरहेको छ पछाडि र पछाडि सर्दै। हिट मेटाउने धेरै सजिलो छ।
यदि तपाईं HTML ढाँचामा ईमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ हेडरमा एक राम्रो लिंक छ मान्छेहरूलाई क्लिक गर्न र ब्राउजरमा ईमेल हेर्नुहोस्?
के तपाईंले ईमेल जाँच गर्नुभयो? हिज्जे, व्याकरण र शर्तहरू बेवास्ता गर्दै जुन तपाईंलाई जk्क ईमेल फोल्डरमा फिल्टर गर्न सकिन्छ?
तपाईं पाठकले ईमेल पढिसकेपछि के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं एक महान प्रदान गर्नुभयो? कल-टु-एक्शन उनीहरूले त्यो कार्य गर्न?
के त्यहाँ कुनै थप जानकारी छ जुन तपाईं पाठकलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ लक्ष्य र खण्ड सामग्री तपाईं बाहिर पठाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईं किन प्रत्येक ईमेलमा जानकारीको एक टुक्राको लागि सोध्नुहुन्न?
तिमीले गर्यौ ईमेल जाँच गर्नुहोस् डाटाको साथ र बिनाको सूचीमा कसरी निजीकरण तार र गतिशील सामग्री प्रदर्शित गर्दछ? के सबै लिंकले काम गरे?
तुरुन्तै गर्नुहोस् कुरा गर्न खोज्नुहोस् वा कष्टकर विपणन को कुरा को पैराग्राफ को माध्यम बाट सुस्त? व्यक्तिहरू व्यस्त छन् - आफ्नो समय बर्बाद गर्न रोक्नुहोस्!
के तपाईं एक साधनको साथ मान्छे प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ बाहिर निस्कदै तपाईको इ-मेल संचारको? यदि होईन - तपाईं वास्तवमै एक महान अनुमति-आधारित संग जान आवश्यक छ ईमेल प्रदायक.
के तपाइँ मानिसहरूलाई एक तरिकाको साथ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ सामग्री साझा गर्दै या त एक मित्र बटन को लागी पठाउने माध्यम वा सामाजिक साझेदारी बटन? र यदि ती साझा गर्छन् - के तपाईंको अवतरण पृष्ठमा यसको सदस्यता विकल्प छ?
मँ सबै समय सदस्यता लिन्छु र ईमेलबाट सदस्यता रद्द गर्दछ। म सँधै सदस्यता लिने बित्तिकै कम्पनीलाई श the्काको फाइदा दिन्छु तर जति सक्दो चाँडो मैले उनीहरूबाट अधिक ईमेलहरू मेटाउँदै छु किनकि उनीहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन… म सदस्यता रद्द गर्छु र सामान्यतया म फेरि कहिले पनि व्यवसाय गर्ने छैन। कम्पनी यदि तपाई कसैलाई सन्देश पठाउन लाग्नु भएको छ - शिष्टतापूर्वक र तिनीहरूको समयको सम्मान गर्नुहोस् र उत्तम ईमेल प्रकाशित गर्नुहोस्!
मोबाइल यहाँ छ। तपाईको साइट होईन।